Kiorda Mpanangom-Baovao Mety Higadra ao Torkia Noho ny Tsanganana Twitter sy Facebook Navoakany · Global Voices teny Malagasy
Kiorda Mpanangom-Baovao Mety Higadra ao Torkia Noho ny Tsanganana Twitter sy Facebook Navoakany
MpanoratraEfe Kerem Sozeri
Voadika ny 10 Marsa 2016 3:35 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, Ελληνικά, русский, English
Tamin'ny 26 Jolay 2015, nakorontan'ny polisy manokana tiorka tamin'ny alalan'ny etona sy tifitra mandatsa-dranomaso i Gazi Cemevi, toeram-pivavahan'ny Alaoita, tao amin'ny manodidina an'i Gazi ao Istanbul. Ny tanjon'ny bemidina dia ny haka ny vatan'i Günay Özarslan, izay matin'ny polisy nandritra ny fanafihana nataony roa andro mialoha izany. Endrika fihetsiketseham-panoherana ny fandevenana ampahibemaso ho an'ny zandriolona ao Torkia. Saripikan'i Hayri Tunç.
Efa ela ny mpandala ny zon'olombelona no nitatitra ny fironan'i Torkia ‘mankany amin'ny fanaovana didi-jadona’. Ny tantaran'ny Kiorda mpanao gazety iray migadra no manasongadina ny manjò ireo vondron'olona roa ireo –Kiorda foko vitsy an'isa sy ny mpiasan'ny fampitam-baovao — izay tena mizaka indrindra izany fibolisarana izany.
Mety higadra mandritra ny taona maro i Hayri Tunç, Kiorda iray mpanangom-baovao avy amin'ny tranonkalam-baovao mahaleotena iray Jiyan, noho ny sioka 7, tsanganana Facebook 11 ary lahatsary YouTube 2 navoakany.
Miainga amin'ireo zava-boatonona ireo no niampangan'ny fitsarana iray tao Istanbul azy tamin'ny volana febroary lasa teo ho ‘manao propagandin'ny fampihorohoroana’, ‘miray tsikombakomba amin'ny fanaovana heloka bevava’ ary ny ‘fanandratana asa mahameloka bevava’ mialoha ny nametrahana azy tao amin'ny fonja fanagadrana alohan'ny fotoam-pitsarana ao am-ponjan'i Silivri faritanin'i Istanbul.
Raha miainga amin'ireo vesatra iampangana azy ireo dia mety higadra mihoatra ny 20 taona any am-ponja i Tunç raha kely indrindra na dia mbola madio aza ny dosieny ara-pitsarana eo amin'ny ady heloka bevava.
Hatramin'ny vao haingana, ny sehatra niasan'i Tunç tamin'ny ankapobeny dia ny mamoaka ireo tantaram-panilikilihana sy tolona any ambany tanàna onenan'ny Kiorda vitsy an'isa am-polony taona maro.
Amin'ny maha-mpanao gazety maka lahatsary azy dia hainy tsara ny manangona antontan-kevitra amin'ireo fifandonan'ny mpanao fihetsiketsehana elatra ankavia sy ny polisy tiorka.
Nisy ireo lahatsary tao amin'ny fantsona YouTube kirakirainy no nahazo mpijery an'arivony sy nivoaka tamin'ireo seha-baovao lehibe toy ny RT Rosiana sy ny France 24.
Lasa manana anjara asa roa amin'ny maha-fampitam-baovao mahaleotena azy ny famahanany Twitter amin'ny fananany mpanjohy 13.600, noho ny fanangonam-baovaony avy amin'ny ilany mifanandrina ao anatin'ny fifanandrinana kiorda.
Fa hatramin'ny vanim-potoana mafana farany teo, raha nivadika ho ady anaty akata mafana vay ny fifanandrinana malefaka nisy teo amin'ny vondrona mitam-piadiana kiorda PKK sy ny fanjakana tiorka, dia noteren'ny governemanta hipetraka amin'ny fampitam-baovao kiorda ny bodofotsin'ny fanampenam-bava tamin'ny alalan'ny fandrarana tranonkalam-baovao mahaleotena an-jatony, ka tafiditra amin'izany ny Jiyan.
(Filazana: ny mpanoratra ity tatitra ity dia tonian'ny Jiyan).
Ny tena angataham-panesorana sioka maro nangatahana tamin'ny Twitter momba an'i Torkia dia ireo kiorda mpanao gazety manana ny lazany, ka ao ihany koa i Hayri Tunç.
In-telo nisongadina ny kaontin'i Tunç tamin'ireo fangataham-panesorana ireo araka ny lahatahiry notaterin'ny mpikatroka mpiaro ny zo an-tserasera sady profesora mpampianatra lalàna ao amin'ny Oniversiten'i Bilgi ao Istanbul Yaman Akdeniz: ny voalohany tamin'ny Aogositra, avy eo tamin'ny Septambra, ary mbola nisy indray tamin'ny Janoary.
Ny fikirizana tahaka izany no nahatonga an'i Torkia ho tampony amin'ny fanampenam-bava ny Twitter manerantany.
Tsy dia mangarahara loatra amin'ny fangatahana ataon'ny governemanta manoloana ny zavatra toy izany ny Facebook, saingy nitatitra kosa i Tunç fa efa im-betsaka izy no tsy tafiditra tamin'ny kaontiny, raha manaisotra sary avy amin'ny fanangonana ireo fifandonana mitranga ao Istambul ny Instagram.
Saingy rehefa tsy nahomby tamin'ny fampanginana an'i Tunç amin'ireny fanampenam-bava miverimberina ireny ny governemanta, noho ny fahazaran'ny Twitter tsy manaiky ny fangataham-panesorana tsanganana mifandraika amin'ny votoatim-panaovan-gazety, dia notafihan'ny polisy ny tranony tamin'ny volana oktobra ary notazonina tamin'ny alalan'ny vesatra ho ‘mpikamban'ny mpanao fampihorohoroana’ sy ‘mampiely propagandim-pampihorohoroana’.
Efa nampangaina ho ‘mpanompo andriamanitra maro’ aza izy nandritra ny famotoran'ny polisy.
Miharihary fa nosaziana noho ny fitateram-baovaom-pifandirana ao anatin'ny fotoana fohy dia fohy itrangàny i Tunç, amin'ny sioka tahaka ity iray tamin'ny Jolay 2015 ity:
Amed Alipaşa'da YDG-H özgürleştirme hamlesi başlattığını açıkladı. pic.twitter.com/iVvgjKKJ36
— hayritunc (@hayriituncc) July 28, 2015
Nanambara ny YDG-H [sampana tanora ao amin'ny PKK] fa nanomboka ny hetsika hanafahana an'i Alipaşa ao Amed [anarana ilazan'ny Kiorda an'i Diyarbakır, Atsinanan'i Torkia] ry zareo
Io sioka manokana io no porofo an-tsary amin'ny fiavian'ny ady an-tanandehibe hoavy, iray volana monja talohan'ny namoahan'ny governora tiorka ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina ao an-tanàna.
Tamin'ny Desambra, nanangona tao amin'ny lahatsary YouTube iray izy mampiseho fa ny ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina maharitra am-bolana no antom-pifandonana amin'ny polisy (manomboka amin'ny 1:45) amin'ny toerana be kiorda ao Istambul.
Ireo fitaovana rehetra ireo dia tafiditra ao anatin'ny volavolam-piampangana, nojeren'ity mpanoratra ity indray ho porofon'ny ‘propagandin'ny fampihorohoroana’ sy ‘firaisana tsikombakomba sy fanandratana ny heloka bevava’.
Tsy vao sambany ny mpanao gazety iray mitatitra momba ny PKK no nogadraina tao Torkia.
Tamin'ny volana aogositra lasa teo ny mpanangom-baovaon'ny Vice isany Jake Hanrahan, Philip Pendlebury, ary ny mpiara-miasa aminy Mohammed Ismael Rasool no notazonina amin'ity ‘fiampangana ho manao fampihorohoroana’ ity; Nampodiana any amin'ny taniny i Hanrahan sy i Pendlebury raha navoaka taorian'ny fandoavana onitra fanafahana kosa i Rasool rehefa nandany mihoatra ny efa-bolana tany am-ponja.
Saingy isan'andro kosa no miatrika fandrahonana toy izany ny Kiorda mpanao gazety.
Araka ny Komitim-Piarovana ny Mpanao gazety (CPJ), dia farafahakeliny fito ny Kiorda mpanao gazety nosamborina tany Torkia tao anatin'ny telo volana ary ny iray hafa maty tao amin'ny toby iray tao Cizre, tanàna kiorda tratran'ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina, raha nanangom-baovaon'ny ezaka hamonjena ny olona maratra mandritra ny fifandonana izy.
Raha eo amin'ny fitondran'i Torkia ireo mpanao gazety eny amin'ny fitsarana ho ‘manao fampihorohoroana’, dia nanoratra ny CPJ tany alohaloha tany fa “raha lazaina amin'ny ankapobeny ny lalàna famaizana ady heloka bevava sy ny lalàna iadiana amin'ny fampihorohoroana no nahafahan'ny manampahefana tiorka mampifangaro ny fanangonam-baovao amin'ireo vondrona voarara sy ny fanadihadiana ireo lohahevitra saropady amin'ny fampihorohoroana madiodio tsy misy fangarony sy ny hetsika hafa midaroka fanjakana”
Taorian'ny fisamborana an'i Tunç, dia nampitandrina ny CPJ fa “nanavao indray ny fombany managadra ireo mpanao gazety mitsikera i Torkia ho famaizana azy ireo amin'ny asany.”
Rehefa nihoatra ny 100.000 ny isan'ny tranonkala noraràna tao Torkia tamin'ny volana oktobra lasa teo, dia nitaky tamin'ny governemanta tiorka ny vondrona mpandala ny fahalalahan'ny aterineto hampitsahatra ny fanampenam-bava ireo fikambanam-pamoaham-baovao mahaleotena sy ireo olon-tsotra mamoaka vaovao.
Talohan'ity fanampenam-bava faobe izy, dia ity governemanta ity ihany koa no tena mpanagadra mpano gazety indrindra tao anatin'ny roa taona misesy, tamin'ny 2012 sy tamin'ny 2013.
Ny raharaha Hayri Tunç no mampahatsiahy antsika ny maha-zava-dehibe ny mpanao gazety mahaleotena ho an'i Torkia, ny maha tena ilaina ny fampielezana ny vaovao amin'ny alalan'ny media sosialy, ary ny maha mora amin'ny governemantan'i Torkia ny fanampenam-bava sy ny fanagadrana azy ireny nefa tsy misy fibedesana loatra avy amin'ny Tandrefana Miara-miombon'antoka amin'i Ankara.
Hotontosaina amin'ny 11 marsa ho avy izao ao Istambul ny fihainoana an'i Tunç eny amin'ny fitsarana.
Fahasalamàna 6 andro izay